Madaxwayne Trump Oo Gaadhay London,Bulshada Dalka Ukna Amaanay.(Sawiro) – Heemaal News Network
Madaxweyne Trump ayaa gaaray dalka UK, halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho shaqo oo seddex maamood ah.
Inta uu socdaalkiisa ku jiro wuxuu la kulmi doonaa boqorad Elizabeth iyo ra’iisul wasaaradda UK, Theresa May.
Mr Trump ayaan waxba ka soo qaadin mudaaharaadyo qorshaysan oo isaga ka dhan ah, waxaana ku jira mid uu ka dhex muuqdo baambole ilmo ah oo astaamihiisii loo ekaysiiyay.
Madaxwayne Trump oo ka hadlay safarkiisa shaqo ayaa dadka reer UK ku amaanay inay jecel yihiin “aad ayey reer UK ii jecel yihiin”.
Sidoo kale madaxwaynaha Maraykanka ayaa ka soo kicitimay magaalada Brussels halkaas oo uu kulan kula lahaa madaxda NATO.
Xoghayaha caafimmaadka ee dalka Britain, Jeremy Hunt ayaa loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Britain, kadib markii uu xilkaasi iska casilay Boris Johnson. Ra’iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa la kulantay cadaadis xoogan oo […]
Wasiirkii Labaad Oo 24 Saac Gudahood Iska casilay Dowlada Britain & Xiisad Ismariwaa Siyaasadeed Oo Taagan.
Xogahayaha arrimaha dibadda dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa xilka iska casilay iyadoo ismar-waa siyaasadeed ay ka horseedday dalkaasi istraatiijiyadda ka bixitaanka Midowga Yurub. Waa wasiirkii labaad oo xil sare ka hayay Ingiriiska oo iscasilay saacado […]
Soomali Degan Dalka Ingriiska Oo Lagu Eedeeyay Inay Carruurtooda ku Qasbaan Guur.
Warbixin lagu daabacay wargeyska The Guardian ayaa lagu sheegay in waalidiinta Soomali Britishka ah ay caruurtooda geeyaan dalka Soomaaliya iyagoo iska dhigaya inay dalxiis u tegayaan balse ku xira xarumo dhaqan celin ah kadibna ku […]